Fihetsika 5 manala ny fanaintainan’ny hatoka sy ny soroka
Manamafy sy mandrafitra ny hoza-pe
Ny fe no anisan’ny faritra mahazo tavy indrindra miaraka amin’ny kibo rehefa mitombo lanja ny vatana. Noho izany indrindra dia tsara atao vory hozatra sy nofo io faritra io. Ireto misy fampihetseham-batana azonao atao any an-trano hikoloana azy
Mampihena ny fe ao anatin’ny 5 minitra isan’andro
Ny fotoana matetika no olan’ny olona maniry hitaiza vatana amin’ny fanaovana fampihetseham-batana.
Manao fampihetseham-batana amin’ny tavoahangin-drano ao an-trano
Mampitombo ny fiantraikany sy ny vokatra entin’ny fampihetseham-batana atao ny manao fampihetseham-batana sady mitazona zavatra mavesa-besatra. Na dia tsy manana ireny fitaovana
Ny fanatanjahan-tena mety, arakaraky ny tanjona tadiavina
Tsy natao hampihenan-tena fotsiny ny fanaovana spaoro na fanatanjahan-tena. Marobe ny tombontsoa azo avy aminy. Miankina amin’ny tanjona tiana hotratrarina kosa ny fisafidianana ny karazana fanatanjahan-tena atao.
Hadisoana 7 tsy mampandaitra ny fampihenan-kibo atao
Na dia maniry ho fisa-kibo haingana aza dia fantaro fa misy ny fihetsika tsy tokony hatao mba hampandaitra ny fampihetseham-batana atao. Ireto manaraka ireto nohadisoana matetika fanaon’ny olona mahakasika izany mantsy :
Manamafy ny hoza-pe sy ny fitombenana amin’ny rindrina ao an-trano
Azonao atao tsara ao an-trano ireto fampihetseham-batana ireto. Tsy mila fitaovana akory fa rindrina ihany no ilaina dia ampy handrafetana ny fe ho mafimafy tsara sady tsara endrika. Mila miaritra kosa mba hahavita ireo fampihetseham-batana rehetra hatramin’ny farany.
Manatsara bika any am-piasana
Tsy manam-potoana firy atokana mba hanaovana spaoro ny olona miasa birao. Tena ilaina anefa izany. Ireto misy paipaika vitsivitsy hahafahanao manao spaoro na dia ao am-piasana ihany aza.
Rehefa vizana loatra ny vatana dia mety hifanenjana ny hozatra. Anisan’ny matetika voan’izany ny hozatra ao amin’ny hatoka sy ny soraka, izay manaintaina tokoa. Atoronay anao ny atao mba hanalana izany havizanana ao amin’ny hatoka sy soroka izany.
Matory mihorirana dia aforitra ny lohalika. Aforitra koa ny kiho ary atao mifamatotra ao ambadiky ny hatoka ny tanana roa. Atao somary manery ny sofina ny hato-tanana. Miaina lalina dia akarina moramora ny kiho eo ambony, toy ny hanakatra ny tafo. Mamoaka rivotra amin’ny vava dia ampidina hanakaiky ny gorodona indray izany kiho izany. Ahetsika kely hahazo aina ny soroka dia averina indimy izay fihetsika izay. Atao toy izany koa ny lafiny ilany
2 Fampihetseham-batana faharoa
Ahorongorona ny servieta dia apetraka amin’ny tany. Mitsilany dia apetraka mifanandrify amin’ny antsasaky ny lamosina ilay servieta nahorongorona teo. Aforitra ny lohalika. Ny tanana kosa, atao mifampisadika ao ambadiky ny hatoka. Miaina lalina dia mamoaka rivotra amin’ny vava sady ahinjitra hihenja ny taolan-damosina. Tokony hifindrafindra toerana ilay servieta, hanotra ny ampahany amin’ny lamosina, ny soroka ary ny hatoka. Mahazo kely amin’izany koa ny kibo sy ny tratra. Miaina lalina tsara dia miverina amin’ny paozy niaingana. Averian in-3 ka hatramin’ny in-5 izay.
3 Fampihetseham-batana fahatelo
Mandohalika dia ipetrahana ny vodin-tongotra. Atao mahitsy tsara ny lamosina sy ny loha. Miaina lalina tsara sady ampidinina miankavia ny loha, atao mifanakaiky amin’ny soroka havia ny sofina havia. Miaina lalina tsara dia averina amin’ny paozy niaingana ny loha. Miaina lalina tsara indray dia ampidinina mankany an-kavia ihany ny loha sady mamoaka rivotra amin’ny vava. Tsy ajanona eo amin’ny soroka intsony ny loha fa somary alefa mankany aoriana, toy ny hiezaka hanakatra ny soroka havanana. Averina amin’ny paozy niaingana dia mivadika amin’ny lafy ilany. Averina avokoa ilay fihetsika teo. Tsy adinoina ny miaina lalina tsara, mandritra izany.
4 Fampihetseham-batana fahefatra
Atao toy ny paozy teo ihany ny vatana. Miaina lalina tsara aloha mialohan’ny hanombohana dia mamoaka rivotra tsara amin’ny vava. Ampidinina manakaiky ny soroka ankavia ny loha. Sady mitroka rivotra amin’ny orona no alefa miankavanana ny loha, dia ahodina manoritra boribory mora dia mora. Atao mihodina intelo tahaka izany dia ahodina miankavia indray, intelo hatrany.
5. Fampihetseham-batana fahadimy
Mipetraka na mandohalika toy ny teo ihany. Apetraka amin’ny andaniny roa amin’ny vatana ny tanana. Sady mitroka rivotra no akarina hanakaiky ny sofina ny soroka. Mamoaka rivotra amin’ny vava dia ampidinina ny soroka. Izay fihetsika izay no averina im-10.
Raha tsikaritrao dia tena manana ny toerany be ao anatin’ireo fampihetseham-batana ireo ny miaina lalina. Hanampy anao hifantoka amin’ny fampihetseham-batana izany. Mba ho afaka tanteraka ny havizanana dia ilaina ny mampitony saina ary manampy ho amin’izany mihitsy ny miaina lalina.